युगल गीतः- नयाँ रंघ
छोटे उस्ताद, प्रक्रिती र हिन्दूस्तानी गोही
विष्मयहरू बीच निर्वाचन पर्व: साता चर्चा - एकलव्य
कुकुरलाइ आची शब्द त्यती राम्रो होइन तर यो उखान एक बिद्वानले राष्ट्रिय पत्रिकामा प्रयोग गरेका थिए। हुनत गाली गलौजमा राष्ट्रिय पत्रिका देखी अन्तराष्ट्रिय ब्लगसम्म भरी भराउ हुन्छन। अझै केही पार्टिगत पत्रिका र ब्यक्तीगत ब्लगमा त गाली र तुछ्छ शब्दको लहर नै हुन्छ, दुबैको उदेश्य एउटै हुन्छ,कसरी बिपक्षीलाइ तल गिराउने भलै आफु पनि तु्च्छ हुन किन नपरोस।
मैले उठाउन लागेको कुरो के भने नानी देखी लागेको बानी छुट्ने त रहेनछ भन्नलाइ हो। प्राय पत्र-पत्रिकामा आएको हो वाइ.सि.एल ले के के उपद्रो गर्दै हिड्छन भनेर। तर पनि संबिधान सभाको निर्वाचन हुने छाट काट आएको थियो। तर १-२ दिन भयो चुनाबका उमेदवार नै मारिन थाले पछि फेर संभिधान सभाको चुनाब नहुने हो कि भन्ने आशंका उबज्न थालेको छ। दिन प्रती दिन नेपालमा मानवताको अवमुल्यन भइरहेको अबस्थामा १५-२० उमेदवार मारिए अचम्म नमाने हुन्छ। बिगतमा हेर्ने हो भने पनि माओबादी बिग बिगी भए देखी प्रती दिन ३-४ जना मान्छे मारिदै आएका छन। त्यस हिसावमा १ जना उमेदवार मारिनु कम भएतापनि एक किसिमको निकास निस्कन लागेको नेपालको लागी राम्रो लक्षण भने होइन।पिटापिट र पार्टी समर्थक मारिने क्रम त कम भएको छैन। आरोप प्रत्यारोप श्रिंखला त टुट्ने कुरै भएन।
फेरी चुरो कुरो तिर फर्किदां किन त हाल सालै मरेका संभिधान सभाका उमेदवार हत्या गर्ने माओबादी निकट भएको पुष्टी भएको छ। जो सुकै निटक होस, हत्यारको पहिचान भएपछि कानुन अनुसार कार्बाही हुनुपर्छ। बिना कारण मारिने बिरेन्द्र शाह हुन कि मरणाशन्न पिटिने डा ज्ञानेन्द्र गिरी हुन, या नया नेपाल बनाउने भनेर युनाइटेड सात पार्टीको संबिधान सभाको उमेदवारको हत्या होस, किन माओबादी निकट नै हुने गर्छन? कि मार्ने समुह माओबादी नै भएर जनताको आंखमा छारो हाल्ने माओबादी निकट भनिन्छ? यसो भने त तिनी बिद्वान डाक्टर नेताको शब्द शापटी लिएर तिन कै पार्टीतिर कुकुरले जंगलबाट शहर पसे पनि आची त छोड्दो रहेनछ निभनेर प्रक्षपेण गर्नुपर्ने अब्स्था आएको छ।
कुकुरलाइ आची होइन यि प्रचण्डवादी सबैलाइ गनाउने आची खुवाउनु पर्छ, न बोलीको ठेगान छ, न ब्यबहारको ठेगान छ। हेरी राखौ साथी संबिदान सभाको भोली पल्ट यि फेरी जंगल पस्छन।
मान्छे को स्वभाव भनेको हत्तपत्त परिवर्तन भै हाल्दैन त्यस माथी पनि कोहि मान्छे जब 'मान्छे' बाट घटेर 'पार्टी कार्यकर्ता' वा 'कामरेड' हुन्छ त्यसपछि त के भन्ने?
त्यसैले तपाईले उठाउनु भएको कुरा एकदमै सटीक र सहि छ। कुकुर कुकुर हो भने त्यसले आची देखेपछि आफ्नो जात जनाईहाल्छ ।
March 24, 2008 at 4:33 AM